Indoda Enobuhle - Abafana Uthando - Bl - Bl Bl - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Umuntu Onobuhle Isilinganiso 4.4 / 5 koku 33
I-N / A, inokubukwa okungu-139.8K
UManhwa, E-Shounen Ai, yaboi
Abasebenzisi abangu-72 babekiswe umaka Lokhu
Buza uNam Jinwoo, ubehlala emthunzini wembangi yakhe, uMa Sangtae, impilo yakhe yonke. Kusuka esikoleni esiphakeme kuya ekolishi, futhi manje kusehhovisi. Kodwa inkanuko iyamangaza, ingaqala njengomona noma inzondo futhi iphenduke into… evusa inkanuko. Manje ikhanda likaJinwoo ligcwele imicabango engcolile futhi evusa inkanuko, akukho noyedwa ophethe yena. Ngaphezu kwanoma yini, ufuna bayeke. Kodwa okuwukuphela kwendlela yokuzivimba kungenzeka kube yinto yokugcina afuna ukuyenza…
Ungathola okuningi umfana uthanda i-anime
Isahluko 34 December 22, 2021
Isahluko 33 December 22, 2021
Isahluko 32 December 22, 2021
Isahluko 31 December 22, 2021
Isahluko 30 December 22, 2021
Isahluko 29 December 22, 2021
Isahluko 28 December 22, 2021
Isahluko 27 December 22, 2021
Isahluko 26 December 22, 2021
Isahluko 25 Mashi 2, 2021
Isahluko 24 Mashi 2, 2021
Isahluko 23 Mashi 2, 2021
Isahluko 22 Mashi 2, 2021
Isahluko 21 Mashi 2, 2021
Isahluko 20 Mashi 2, 2021
Isahluko 19 Mashi 2, 2021
Isahluko 18 Mashi 2, 2021
Isahluko 17 Mashi 2, 2021
Isahluko 16 Mashi 2, 2021
Isahluko 15 Mashi 2, 2021
Isahluko 14 Mashi 2, 2021
Isahluko 13 Mashi 2, 2021
Isahluko 12 Mashi 2, 2021
Isahluko 11 Mashi 2, 2021
Isahluko 10 February 1, 2021
Isahluko 9 February 1, 2021
Isahluko 8 February 1, 2021
Isahluko 7 February 1, 2021
Isahluko 6 November 28, 2020
Isahluko 5 November 28, 2020
Isahluko 4 November 28, 2020
Isahluko 3 November 24, 2020
Isahluko 2 November 24, 2020
Isahluko 1 November 24, 2020
Umtapo Wezincwadi KaCrow KaDanmei